စားမြုံ့ပြန်တတ်သည့် တိရစ္ဆာန်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
(စားမြုံ့ပြန်ကောင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
စားမြုံ့ပြန်တတ်သည့် တိရစ္ဆာန်များ (Ruminants) တွင် နွား၊ သိုး၊ ကုလားအုပ်၊ သမင်၊ ဆိတ်၊ တောဆိတ်၊ သစ်ကုလားအုပ် စသော တိရစ္ဆာန်များ ပါဝင်သည်။ ဤတိရစ္ဆာန်များ၌ ထူးဆန်းသော အစာချေနည်းရှိသည်။ အများ အားဖြင့် ယင်းတိရစ္ဆာန်များသည် အစာကို ကြိတ်ခြင်းမပြုဘဲ တံထွေးနှင့်ရော၍ မျိုချလေ့ရှိသည်။ အစာသည် အစာဝင် လည်ချောင်းမှတစ်ဆင့် အစာအိမ်သို့ ရောက်သွားသည်။
အစာအိမ်တွင် အခန်းလေးခန်း ပါရှိရာ ပထမအခန်းမှာ ရူးမင်း၊ ဒုတိယအခန်းမှာ ရက်တီကျူးလမ်း၊ တတိယအခန်းမှာ အိုမာဆမ်၊ စတုတ္ထအခန်းမှာ အဗိုမာဆမ်ခေး အခန်းတို့ ဖြစ်ကြ သည်။ စတုတ္ထအခန်းမှာ အစာအိမ် အစစ်အမှန် ဖြစ်သည်။ အခန်းအားလုံးပင် အစာကို ချေချက်ရာ၌ ကူညီကြသည်။ အစာ ကို လုံးထွေးပြီး အကြမ်းလိုက် မျိုချလိုက်သောအခါ အစာသည် ရူးမင်းခေါ် အကြီးဆုံး အစာအိမ်အခန်းသို့ ရောက်လာသည်။ အစာသည် ဤအခန်းမှ ရက်တီကျူးလမ်းခေါ် ပျားပလို့နှင့် တူသော အစာအိမ်၌ ဒုတိယအခန်းသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
ရက်တီကျူးလမ်းတွင် အစာသည် စားမြုံ့ အလုံးကလေးများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းသွားသည်။ အစာစားပြီးသော တိရစ္ဆာန်သည် စားမြုံ့ပြန်လိုသောအခါ ရက်တီကျူးလမ်းတွင် ပါရှိသော ကြွက် သားက ထိုစားမြုံ့ပြန်ကလေးများကို ပါးစပ်သို့ရောက်အောင် ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ပါးစပ်သို့ ပြန်ရောက်လာသော စားမြုံ့ကို မေးဝဲ၍ ချေချက်ပြီးလျှင် အစာအိမ်၏ တတိယ အခန်းဖြစ်သော အိုမာဆမ်သို့ ပို့လိုက်သည်။ ထိုနေရာမှတစ်ဖန် အစာသည် အစာအိမ်အစစ် အဗိုမာဆမ်သို့ ရောက်သွားသည်။ ကုလားအုပ်၏ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်မှာအခြား စားမြုံ့ပြန်ကောင် တို့ကဲ့သို့ အစာအိမ် တတိယအခန်း အိုမာဆမ် မပါရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အစာအိမ်မှ အစာသည် အစာအိမ်ရည် သို့မဟုတ် ဂဲစတြစ်ရည်တို့ဖြင့်ရော၍ အူသိမ်များသို့ ရောက်ရှိသွားသော အခါ အစာချေချက်ခြင်း လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားသည်။ ချေချက် ပြီးသား အစာကို အူသိမ် အတွင်းမျက်နှာပြင်က စုတ်ယူ၍ ခန္ဓကိုယ် အနှံ့အပြားသို့ သွေးကြောများဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးသည်။
စားမြုံ့ပြန်ကောင်တို့၏ အခန်းလေးခန်းပါသော အစာအိမ်။
စားမြုံ့ပြန်ကောင်များထဲတွင် ကုလားအုပ်နှင့် လာမာကုလားအုပ်တို့မှလွဲ၍ အခြားတိရစ္ဆာန်များ၌ အထက်မေးရိုး တွင် ရှေ့သွားများ မပါချေ။ သို့သော် သွားဖုံးသည် မာသော ချပ်ပြားကြီး ဖြစ်နေသောကြောင့် သွားကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုနိုင် သည်။ အစာစားသောအခါ မြက်ကို အပေါ်သွားဖုံးချပ်ပြားနှင့် အောက်သွားများ အကြားတွင် ကိုက်ထားသည်။ ထိုနောက် ခေါင်းကို ဘေးဖက်သို့ ရမ်းလိုက်သောအခါ မြက်ပင်များသည် ပြတ်၍ ပါလာသည်။ စားမြုံ့ပြန်ကောင်များသည် အံသွား များဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျှင်များကို ကြိတ်ဝါးနိုင်ကြသည်။
↑ "Old world ruminant morphophysiology, life history, and fossil record: exploring key innovations ofadiversification sequence" (2014). Annales Zoologici Fennici 51 (1–2): 80–94. doi:10.5735/086.051.0210.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စားမြုံ့ပြန်တတ်သည့်_တိရစ္ဆာန်များ&oldid=716512" မှ ရယူရန်